Iselfowuni ibonakalisa uhlobo lwayo lwe-smartphone olusongekayo kwi-MWC | I-Androidsis
I-TCL iveza uhlobo lwe-smartphone olusongekayo lwe-smartphone kwi-MWC19
UEder Ferreño | | Iiselfowuni, MWC
I-TCL yenye yeenkampani ezikhoyo kwi-MWC 2019, phakathi kwezinye nge Uluhlu olutsha lwee-smartphones ze-Alcatel. Kodwa inkampani isishiya nezinye iindaba ezininzi kumnyhadala oseBarcelona. Kuba kuyaziwa ukuba bayasebenza ekusongeleni ii-smartphones, eziza kuqala ukwaziswa ngo-2020. Iprototype yokuqala efanayo sikwazile ukuyazi e-Barcelona, enegama i-DragonHinge.
I-DragonHinge yitekhnoloji eye yaphuhliswa yi-TCL ngenxa yokusonga ii-smartphones. Ihenjisi eneempawu ezininzi kwaye iya kuvumela ukwenziwa kweefowuni ezahlukeneyo ezisongelayo, eziza kuthi zifike phakathi kwezinye kwiAlcatel kwi2020. Yintoni esinokuyilindela kule teknoloji?
Sele sinayo ndikwazile ukuzibona kuqala ezi prototypes zintsha zilungiselelwe yi-TCL zeAlcatel. Ke kunokwenzeka ukuba uqonde ngcono ukusebenza kwezi Smartphones zintsha esiya kuthi sizibone kwimarike ngonyaka ziya kuba ngcono. Ukongeza ekwazini ngakumbi ngemvelaphi yale teknoloji. Itekhnoloji inkampani esele inelungelo elilodwa lomenzi wayo, kwaye ithiwe thaca njengenkqubo eyahlukileyo kwezinye iimveliso ezikwi-Android.
1 I-TCL kunye ne-Alcatel babheja ekusongeleni ii-smartphones
2 Kutheni le nto iTCL ilinde de kube ngu-2020?
I-TCL kunye ne-Alcatel babheja ekusongeleni ii-smartphones
Le prototype inkampani isivelisayo iza nefayile ye- Iphaneli ye-7,2-intshi ubukhulu be-AMOLED ngesisombululo se-2K + (2.048 x 1.536 iipikseli). I-CSOT, inkampani yeqela, yayijongene nokuvelisa ipaneli. Ukongeza, kufanele kuqatshelwe ukuba le paneli ihlala kwi-90% ngaphambili kweso sixhobo. Yintoni enomdla kwaye mhlawumbi isitshixo kwiDragHinge kukuba inokugoba nangona ufuna. Into eyahlulahlula kwiinkqubo ezinje nge Galaxy Fold okanye Huawei Mate X.
I-TCL iphuhlise i-DragonHinge njengenkqubo yokusonga kwifowuni. Njengoko sele kukhankanyiwe, sisixhobo esivumela oko usonge ifowuni ngaphandle, ngaphakathi, okanye usonge kuyo, ngokungathi yifowuni ye-clamshell. Ukuguquguquka okuthembisa ukuba yeyona nto iphambili kule nkqubo, ukongeza ekuziqhelaniseni nezinye iimeko. Yenziwe ngeemodyuli ezininzi ezincinci, ezivumela ukugoba ukuba nobubanzi be radius ukunqanda iingxaki kule ndawo.
Ngasemva komnxeba sinokubona iikhamera ezintathu, esingenalo ulwazi ngalo ngoku. Ngokucacileyo esinokulindela ukuba akukho lwazi, kuba le prototype. Ke kuyo yonke i-2019 sinokulindela ukuba i-TCL / Alcatel isebenze kuyo. Ke njengokuba inyanga zihamba siyokwazi ngakumbi ngazo. Njengakwezinye iimodeli zokugoba, iyilelwe ukwenza izinto ezininzi njengeyona njongo iphambili. Iya kuvumela abasebenzisi ukuba babe neeapps ezininzi ezivulekileyo kwaye basebenze nabo ngokulula.
Le yinto ebalulekileyo, kuba ukusonga ii-smartphones, ukusebenza ngokusonga kunye nokuvula ifowuni yinto eya kwenziwa amaxesha amaninzi. Into i-TCL ethembele kuyo xa isenza itekhnoloji ye-DragonHinge yokusonga ii-smartphones zayo. Okwangoku, Sele baneefowuni ezintlanu ezahlukeneyo zolu hlobo. Asazi ukuba zonke zizakwaziswa. Nangona eyokuqala izakufika ngo-2020, njengoko isitsho inkampani. Siyabona ukuba babheja kwiifomathi ezahlukeneyo, bebonisa iintlobo ezahlukeneyo kule ndawo yeefowuni ze-Android ezinokusongwa.
Kwinkampani bayazibona ezi ukusonga izikrini njengethuba elihle. Ngokukodwa xa kusiziwa kuguquko loyilo, ekuthe kwiminyaka yakutshanje lumi kancinci, kuba iimodeli zohlobo oluthile ziyafana kakhulu nezinye iimveliso kwi-Android. Ngezixhobo zolu hlobo
Kutheni le nto iTCL ilinde de kube ngu-2020?
Ukuba sele benomzekelo wokuqala, Uninzi luya kuzibuza malunga ne-TCL kunye nezizathu zeAlcatel zokufuna ukulinda de kube li-2020. Ngokungafaniyo neempawu ezinje ngeHuawei okanye iSamsung, inkampani ayinasidingo okanye injongo yokuzibeka njengenye yeenkokheli zeli candelo okanye ukuzibeka njengophawu lweprimiyamu kulo. Ke ngoko, bakhetha ukulinda de kube li-2020 de imodeli yokuqala isungulwe, into efana nale iya kwenziwa yi-LG.
Ukongeza, inkampani iyithethile loo nto bafuna ukulinda de itekhnoloji isekwe emarikeni. Into eya kuthi ngokungathandabuzekiyo ithathe ixesha ukuba ibe njalo. Njengoko iinyanga zihamba kwaye iimodeli zifika, ukongeza kwiiapps kunye nenkqubo yokusebenza ekulungiselelwe yona, iya kufikeleleka ngakumbi kubaphulaphuli abaqhelekileyo. Ke bafuna ukulinda ukukhutshwa kwayo. Ke ukuze yonke imiceli mngeni yezixhobo zekhompyutha kunye nesoftware evelayo isonjululwe ukuze inike amava omsebenzisi amahle.
Njengoko kuchaziwe kwi-TCL, esi sixhobo siza kufika kwi-2020 ngeAlcatel, iya kuba nexabiso elingaphantsi kwe-1.000 euro. Ixabiso eliphantsi kunokwaziswa kweGolden Fold kunye neHuawei Mate X. Eli xabiso liphantsi kakhulu kunezinye iimveliso sesinye sezizathu zokuba balinde. Ukusukela ekuqaleni zonke iitekhnoloji ezintsha zibiza kakhulu.
Nangona nje iinkqubo zokuvelisa ziya kubekwa emgangathweni, ukongeza kwiingxaki ezinokubakho, ixabiso lokusonga iifowuni kwi-Android liza kuhla. Ke i-TCL kunye neAlcatel ziya kuthi emva koko zikwazi ukuvelisa i-smartphone esongekayo ngexabiso eliphantsi, elifikeleleka ngakumbi kwinxalenye enkulu yabasebenzisi kwintengiso. Okwangoku, sanelisekile kukubona ezi prototypes, de kufike imodeli yokuqala kwi2020 evela kwiAlcatel.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-TCL iveza uhlobo lwe-smartphone olusongekayo lwe-smartphone kwi-MWC19
santiago ramirez lopez sitsho
Wow umxholo bahlala besabelana
Phendula Santiago ramirez lopez
Uhlaziyo olutsha lweTelegram longeza ukhuphelo oluzenzekelayo kunye nokudlalwa kweevidiyo
I-Swatch firm iyalahla i-Samsung ngokukopisha amanqanaba ezinye zeewotshi eziyimifuziselo